वीरगञ्जमा सेना, प्रहरी, कैदी बन्दी र स्वास्थ्यकर्मीसहित ३४ जनामा कोरोना संक्रमण – Nepal Japan
वीरगञ्जमा सेना, प्रहरी, कैदी बन्दी र स्वास्थ्यकर्मीसहित ३४ जनामा कोरोना संक्रमण
नेपाल जापान १४ श्रावण १२:५५
वीरगञ्जमा नेपाली सेना, प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, कैदीबन्दी र सर्वसाधारण गरी थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । समाचार अनुसार नेपाली सेनाका १ जना, नेपाल प्रहरीका ३ जना, कैदीबन्दी ६ जना, कारागारका कर्मचारी २ जना, स्वास्थ्यकर्मी १ जना रहेका छन् ।
नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार नारायणी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा २ सय ७४ जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
संक्रमितमध्ये २ देखि ६५ वर्ष उमेरका ३४ जना रहेका र जसमध्ये ५ जना बालबालिका र १० जना महिला छन् डा. उपाध्यायले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा मात्रै नभएर पेड पीसीआर गराएकामा पनि कोरोना देखिएको बताउनुभयो ।
संक्रमितमध्ये २० जना वीरगञ्जकै छन् । वीरगञ्जका वडा नं ९, ५, ४, ११ श्रीपुर, आदर्शनगर, बेल्वा, भिस्वा, सिर्सियाका बासिन्दामा संक्रमण देखिएको हो । त्यस्तै आफैंले पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गराएका १ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
पर्सामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । यसअघि नै ४८ जना संक्रमित अस्पतालसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यतिबेला ५० बेड क्षमताको अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल गण्डकमा ६२ जना संक्रमितलाई राखिएको छ ।
जसमध्ये पाँच जना आईसीयुमा छन् । आठ जनालाई त्रिजुद्ध स्कुलमा राखिएको छ । पाँच जना पर्सागढीमा, ३ जना सखुवाप्रसौनीमा र १ जनालाई ठोरीमै राखिएको छ । तर ती पालिकाहरुमा आइसोलेसन सेन्टर छैन ।